Sida loo abuuro wada sheekeysi naftaada oo ku saabsan WhatsApp on Android | Androidsis
Sida loo abuuro wada sheekeysi WhatsApp ah naftaada
Eder Ferreño | | Codsiyada Android, Whatsapp
Kuwa isticmaala Telegram waxay horeyba u ogaayeen in arjiga uu noo ogolaanayo inaan la sheekaysan karno nafteena. Wadahadal si aad kuugu soo dirto sawirro aad rabto inaad kaydiso, ama fariimo xusuusin ah. Nasiib darrose, WhatsApp-ka ma heli karno shaqadan hooyo. Wax ay adeegsadayaal badani hubaal ka seegaan. Laakiin waxaa jira dhowr siyaabood oo loo sameeyo.
Sidan oo kale, waa suurtagal inaad wadahadal la yeelato naftaada adoo adeegsanaya WhatsApp taleefankaaga casriga ah ee Android. Tani waa shaqo laga yaabo inay daneynayaan dad badan. Maaddaama sidan oo kale ay suurogal tahay in farriinno noogu soo diraan xusuusin ahaan ama in la qoro cinwaanno, iyo kuwo kaleba, in lagu sheekeysto innaga uun
Waxa ugu fiican waa taas maahan inaan wax rakibno si tan loo helo. Sidan oo kale, waxaan ku abuuri karnaa sheeko shaqsiyeed WhatsApp, oo aad adigu fariimo ugu diri karto naftaada, sida Telegram oo kale. Ilaa hada, dalabku waligiis kuma fakarin soo bandhigida hawl sidan oo kale ah, in kastoo xaqiiqadu tahay inay tahay wax ay adeegsadayaal badani soo dhoweeyaan.
Sida loo dhoofiyo wada sheekaysiga Telegram iyo WhatsApp
Waqtigan xaadirka ah waxaan heleynaa laba ikhtiyaar oo suurtagal ah oo arrintan la xiriira. Labadooduba sifiican ayey u shaqeeyaan mana ahan kuwo isku murugsan. Marka waxay ku xirnaan doontaa mid kasta dookhiisa. Sikastaba xaalku ha ahaadee, xulashooyinkaas waxaan ku yeelan karnaa sheeko gaar ah, annaga oo iskula jirna dalabka fariinta ee ku saabsan Android
1 Abuur koox oo tirtir inta kale ee isticmaaleyaasha
2 Adeegsiga biraawsarka
Abuur koox oo tirtir inta kale ee isticmaaleyaasha
Habka koowaad ee aan ku abuuri karno tan ayaa ah abuurista koox WhatsApp, taas oo aan markaas ka takhalusi doonno xubnaha intiisa kale, maxaa yeelay waxaan ognahay inay jiraan dhowr siyaabood. Sidan oo kale, waxaad ahaan doontaa xubinta kaliya ee kooxda waxaadna awoodi doontaa inaad adeegsato sheeko sheekeysi ah si aad fariimo ugu dirto naftaada. Hab fudud, laakiin aad waxtar u leh in la helo. Tallaabooyin noocee ah ayaannu ku raaci karnaa kiiskan?
Ku fur WhatsApp taleefankaaga Android
Guji batoonka tallaabada sabaynaysa
Guji Kooxda Cusub (si aad u abuurto sheeko kooxeed cusub)
Xullo qof ka mid noqda kooxdaas
Samee kooxda (sawirka iyo magaca)
Markii kooxda la abuuro, ka saar qofka kale kooxda
Kooxda horay ayaa loo abuuray waana la isticmaali karaa
Fariin naftaada ugu dir sheekada
Sidan oo kale, ayaa sheegay in chat horeba ugu firfircoon tahay dalabka, sidaa darteed waad isticmaali kartaa wakhti kasta. Haddii aad rabto inaad naftaada u dirto sawir ama feyl, sababtoo ah waxaad dooneysaa inaad si dhaqso leh u keydiso ama sababtoo ah waxaad dooneysaa inaad heshid xusuusin ama xog aadan rabin inaad lumiso, waxaad awoodi doontaa inaad ku adeegsato wadahadalkan arjiga. Intaa waxaa sii dheer, waxaad awoodi doontaa inaad kahesho labadaba taleefankaaga iyo adigoo adeegsanaya WhatsApp Web oo wadarta raaxada leh. Marka waa hubaal inay kaa bixi doonto dhibaatada in ka badan hal munaasabad.
Xulashada labaad ee aan arrintan ku leenahay, inaan kula yeelano sheeko gaar ah WhatsApp, waxay u baahan tahay inaan adeegsanno biraawsarka. Xaaladdan oo kale, waa wax aan ka qaban karno kombuyuutarka, laakiin sidoo kale taleefanka. Labada ikhtiyaarba waa suurtagal, markaa ma soo bandhigeyso dhibaatooyin. Waxa aan sameyn doonno waa inaan adeegsanno xeelad aad ugu eg tii aan adeegsannay muddo ka hor, markaan ku barno sida loo sameeyo fariimo ugu dir dadka aan xiriirada ku laheyn barnaamijka.Mabda'a waa isku mid arrintan. Marka way kuu sahlanaan doontaa adiga.
Waxaan isku dayi karnaa inaan galno cinwaankan biraawsarka: api.whatsapp.com/send?phone=0034TUNUMERO anaga oo galina lambarka taleefankaaga halka qoraalkaani yaalo. Way dhici kartaa taas Waxaan kuu fasaxay inaad fariin toos kuugu soo dirto oo sidaas darteed waxaad horeyba uheshay sheekadan lagu abuuray arjiga. In kasta oo ay jiraan waqtiyo ay khalad siiso, tusaale ahaan igama tegin. Laakiin, waxaa jira waddo labaad oo la heli karo iyadoo la adeegsanayo isla habkan, oo waliba aad u fudud.
Hadday kugu dhacday adiga oo kale WhatsApp ma furin daaqad qoraal markii aan adeegsanay habkaas. Laakiin, waxaan "ku qasbi karnaa" codsiga inaan u furno dariishad qoraal qaab aad u fudud. Xaaladdan oo kale, URL-ka ay tahay inaan isticmaalno waa kuwan soo socda: api.whatsapp.com/send?phone=0034TUNÚMERO&text=hello iyo daaqad ayaa ka soo muuqan doonta oo ah inaan kaliya riixno badhanka cagaaran si aan farriinta ugu dirno Qaabkani wuu ii shaqeeyay waxaanan awooday inaan fariin isu diro aniga oo aan wax dhibaato ah ku qabin dalabka. In kasta oo ay si fiican uga shaqeyso biraawsarka kumbuyuutarka, iyadoo la adeegsanayo nooca bogga ee arjiga. In Android waan awoodaa, inkasta oo markii ugu horeysay ay i siisay qalad.
Sida loo arko heerarka xiriiradaada WhatsApp adiga oo aan ogeyn
Sidan oo kale, hadda waa suurtogal in si gaar ah loogu wada sheekeysto WhatsApp, halkaasoo aad fariimaha ugu diri kartid naftaada. Tallaabooyinku maahan kuwo isku murgisan oo sidan oo kale waxaa suurtagal ah in lagu yeesho mid ka mid ah howlaha xiddigga ee Telegram, oo si toos ah ugu jira tartameheeda weyn. Ha ka waaban inaad tijaabiso, maxaa yeelay hubaal inay waxtar badan kuu yeelan doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo abuuro wada sheekeysi WhatsApp ah naftaada